Kim Jong-un oo xaqiijiyay kulanka uu la yeelanayo Trump - BBC News Somali
Kim Jong-un oo xaqiijiyay kulanka uu la yeelanayo Trump
Image caption Pyongyang ayaan weli ka hadlin arrimaha ku saabsan shirka dhexmari doona labada hogaamiye
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa markii ugu horreysay si cad u xaqiiyey wadahadallada uu la yeelan doono dhiggiisa Mareykanka sida ay warbaahintu sheegtay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bishii la soo dhaafay ogolaaday in uu wadahadal la yeesho dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-Un, balse xukuumadda Pyongyang ayaan weli ka hadlin arrimaha ku saabsan shirka dhexmari doona labada hogaamiye, iyadoo aan la xaqiijinin goobta iyo xilliga uu shirka qabsoomi doono.
Madaxweyne Trump ayaa isniintii sheegay in uu qorshaystay in uu la kulmo Mr Kim, iyadoo warbixinno ka soo baxay saraakiisha maamulka dalkaasi ay sheegayaan in uu Mareykanka la xiriiray Kuuriyada Waqooyi, ayna ka wadahadleen diyaargarowga shirka dhexmari doona labada dal.
Hogaamiyayaasha Labada kuuriya oo khadka telefoonka ku wada hadli doono
Trump waa "canug, kalsoonina malahan"
Shirkan oo loo shaaciyey si lama filaan ah ayaa ka yaabiyey dad badan oo kormeerayaal ah iyagoo sheegay in shirka noocaan oo kale ah uu u baahan yahay qorsheyn iyo wadaxaajood qaadanaya muddo bilooyin ah.
Hase yeeshe haddii uu wadahadalka u dhexeeya labada hogaamiye qabsoomo waxaa ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee madaxweyne ka socda dalka Mareykanka uu la kulmo hogaamiye ka soo jeeda Kuuriyada Waqooyi.
Mr Kim ayaa lagu wadaa in uu la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, ka dib isku dayo la sameeyey si loo wanaajiyo xiriirka ka dheexya labada waddan.
Kulanka dhexmari doona Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayuu ujeedkiisa yahay in cadaadis lagu saaro Kuuriyada Waqooyi in ay hakiso tajiibinta hubkeeda nugliyeerka, balse dadka dhaliila arrintaa ayaa sheegaya in xukuumadda Pyongyang ay kaliya doonayso sidii loogu fududayn lahaa ka qaadista cunaqabataynta dhinaca dhaqaalaha.